Zanak’i Fandriana Hifankahita etsy Soanierana
Aleo tara toy izay tsy misy ! Izay no azo hanambarana ny hetsika fifampiarahabana nahatratra ny taona fanao isan-taona ho an’ny Zanaky ny distrikan’i Fandriana.
Hetsika karakarain’ny Association Ny Aina, izay tarihan-dRakotomalala Dina Taratriniaina. Fotoana ihany koa hankalazana ny faha-10 taona niorenan`ny fikambanana ny zoma 6 martsa izao etsy amin`ny CEMES Soanierana. Fifankahitana aty an-tany fitadiavana no anton’ny lanonana miaraka amin’ireo andrarezin’ny fanafanana fety toa an`i Francis Turbo sy Generation Mars. Razanamahasoa Christine, filohan`ny Antenimieram-pirenena, no reny mpiahy ny hetsika ary hosinganina manokana ireo olona manan-kaja sy miara-miasa amin`ny zanak`i Fandriana, hoy i Mamonjy Randriamamonjisoa, mpitondra tenin`ny Association Ny Aina, raha nitafa tamin`ny mpanao gazety omaly tetsy Tsimbazaza . Entanina hatrany ny vahoakan`i Fandriana araka ny teny filamatra hoe « Ny Agnarandray tsa afify ». Ny fanamby ho amin`ny dimy taona manaraka dia ny hampitombo ny ambaindain`ny fikambanana sy ny asa mba hahavita misimisy kokoa hatrany, hoy hatrany ny fanazavana. Ny Association Ny Aina dia fantatra amin`ny asa sosialy toy ny fanampiana ireo kaominina 15 ao amin`ny distrika, ny fanampiana ireo CEG eo amin`ny lafiny fotodrafitrasa na fampitaovana, didim-poitra faobe…